“စမတျကြ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ” - ONE DAILY MEDIA
Smart Goal !!
လူတဈယောကျ အောငျမွငျဖို့၊ ခမျြးသာဖို့၊ တိုးတကျကွီးပှားဖို့​အတှကျ ရညျမှနျးခကျြ ရှိရပါမယျ။ ဒါ​ပေ​မဲ့ အဲဒီရညျမှနျးခကျြဟာ ​ယောငျဝါးဝါး ​ရညျမှနျးခကျြမြိုး​​တော့ ဖွဈ​နလေို့ မရပါဘူး ခငျဗြ။
“အောငျမွငျ​​​တဲ့သူ ဖွဈခငျြပါတယျ”၊ “ခမျြးသာခငျြပါတယျ”၊ “ဝိတျကခြငျြပါတယျ” ဆို​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ​တှဟော ​​ယောငျဝါးဝါး နိုငျလှနျးပါတယျ။ ​အထာမကြ၊ စမတျမကြ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြမြိုး​တှပေါ။ ဒါဆိုရငျ စမတျကြ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြမြိုးဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးလဲ။
SMART စမတျကြ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြဆိုတာ
S – Specific – တိကရြမယျ
M – Measurable – တိုငျးထှာလို့ ရ ရမယျ
A – Achievable – ဖွဈနိုငျ​ခွရှေိရမယျ
R – Relevant – ကိုယျ​နဲ့ ဆိုငျရမယျ
T – Time-bound – ​အခြိနျ ကနျ့သတျထားရမယျ
​မွနျမာလို မှတျရလှယျအောငျ ​​ဆောငျပုဒျလေး ရေးပေးထားပါတယျ။
“တိကြ၊ တိုငျးထှာ၊ ဖွဈနိုငျတာ၊ ဆိုငျရာသတျမှတျ၊ ခြိနျကနျ့သတျ။”
ရညျမှနျးခကျြကို တိကနြိုငျသလောကျ တိကအြောငျ သတျမှတျပါ။ “ခမျြးသာခငျြတယျ” ဆိုတာထကျ “​ငှေ ဘယျလောကျတိတိကို ဘယျ​​နှဈနှဈ ​အကွာမှာ ဘာ​အလုပျလုပျပွီး ရအောငျကွိုးစားမယျ” ဆို​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြမြိုး ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
(၂) တိုငျးထှာလို့ ရ,ရမယျ
“ဝိတျကခြငျြတယျ” ဆိုတာထကျ “ဘယျနှဈ​​ပေါငျ ကခြငျြတယျ”၊ “ကိုယျ​အလေးခြိနျကို ​​ဘယျနှဈ​​ပေါငျ​အောကျမှာရှိ​နအေောငျ ကွိုးစားမယျ” ဆိုတာမြိုး ဖွဈရပါမယျ။
ရညျမှနျးခကျြဟာ ဖွဈနိုငျ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ဖွဈရပါမယျ။ “မနကျ​ဖွနျ ထီပေါကျရမယျ” ဆိုတာမြိုး၊ “မနကျ​ဖွနျ ​​ပေါငျ ၅၀ ဝိတျခကျြခငျြးကြ​စရေမယျ” ဆိုတာမြိုး​တှကေ​​တော့ ဖွဈ​နိုငျ​ခွနေညျးလှပါတယျ။
(၄) ကိုယျ​နဲ့ ဆိုငျရမယျ
ကိုယျ​နဲ့ မသကျဆိုငျ​ မပတျသကျ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ မဖွဈရပါဘူး။ ဥပမာ ​”မွနျမာ​ ​အမြိုးသား ဘောလုံး ​အသငျး ​၂၀၂၁ အ​​ရှေ့​​တောငျအာရှ​အားကစားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲရမယျ” ဆို​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြဟာ ​ဘောလုံးပရိသတျ​တှဖွေဈ​တဲ့ ကြှနျ​​တျော​တို့နဲ့ သကျဆိုငျ​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြ မဟုတျပါဘူး။ ​အားပေးရုံက လှဲပွီး ကိုယျလညျး ဝငျ​ကနျဖို့ မစှမျးဘူး​လေ။ ​ဘောလုံး​အသငျး​နဲ့ နီးစပျသကျဆိုငျ​တဲ့ ကစားသမား၊ နညျးပွ၊ ​​အားကစား ​အသငျး​အ​ဖှဲ့​တှေ​ဆိုရငျ​​တော့ ဒီရညျမှနျးခကျြကို ထားလို့ရပါတယျ။ ဖွဈနိုငျ​ခွေ ရှိမရှိ​​တော့ ​သခြော သုံးသပျကွရမှာ​​ပေါ့။
ရညျမှနျးခကျြဟာ ကိုယျ​နဲ့ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျပွီး ကိုယျ့အတှကျ တကယျ လိုအပျ​တာမြိုး ဖွဈ​နရေပါမယျ။
(၅) အခြိနျ ကနျ့သတျထားရမယျ
ရညျမှနျးခကျြကို ဘယျ​အခြိနျမှာ ​​ဖွဈမွောကျအောငျ လုပျမယျဆိုတာကို ​အခြိနျကနျ့သတျထားရပါမယျ။ ​အခြိနျ ကနျ့သတျမထားရငျ ​အလုပျမဖွဈပါဘူး။
“​ငှသေခငျ ဖွဈရမယျ” ဆို​တာထကျ “​​ငှသေခငျဖွဈဖို့ ​အတှကျ ဘာ​အလုပျ​တှလေုပျပွီး ​​အသကျ ဘယျလောကျမှာ ငှဘေယျလောကျ ပိုငျဆိုငျရမယျ” ဆို​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြက ပိုပွီး စမတျကပြါတယျ။
“တိကြ၊ တိုငျးထှာ၊ ဖွဈနိုငျတာ၊ ဆိုငျရာ သတျမှတျ၊ ခြိနျကနျ့သတျ။”​ဆောငျပုဒျက မှတျရတာ ခကျ​လိုကျတာ။ ပိုတိုတာလေး မရှိဘူးလား?? ရှိတာ​​ပေါ့။
“တိ၊ တိုငျး၊ ဖွဈ၊ ဆိုငျ၊ ကနျ့”
ဒါ​နဲ့ စကားမစပျ ​”မွနျမာ့​ အားကစား ကမ်ဘာကို လှမျးရမညျ” ဆို​တဲ့ ရညျမှနျးခကျြဟာ စမတျကမြကြ ဆိုတာလေးကို သုံးသပျ ​မှတျခကျြပေး​ခဲ့ကွပါ​ဦး ခငျဗြာ။
လူတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့၊ ချမ်းသာဖို့၊ တိုးတက်ကြီးပွားဖို့​အတွက် ရည်မှန်းချက် ရှိရပါမယ်။ ဒါ​ပေ​မဲ့ အဲဒီရည်မှန်းချက်ဟာ ​ယောင်ဝါးဝါး ​ရည်မှန်းချက်မျိုး​​တော့ ဖြစ်​နေလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျ။
“အောင်မြင်​​​တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်”၊ “ချမ်းသာချင်ပါတယ်”၊ “ဝိတ်ကျချင်ပါတယ်” ဆို​တဲ့ ရည်မှန်းချက်​တွေဟာ ​​ယောင်ဝါးဝါး နိုင်လွန်းပါတယ်။ ​အထာမကျ၊ စမတ်မကျ​တဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုး​တွေပါ။ ဒါဆိုရင် စမတ်ကျ​တဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
SMART စမတ်ကျ​တဲ့ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ
S – Specific – တိကျရမယ်
M – Measurable – တိုင်းထွာလို့ ရ ရမယ်
A – Achievable – ဖြစ်နိုင်​ခြေရှိရမယ်
R – Relevant – ကိုယ်​နဲ့ ဆိုင်ရမယ်
T – Time-bound – ​အချိန် ကန့်သတ်ထားရမယ်
​မြန်မာလို မှတ်ရလွယ်အောင် ​​ဆောင်ပုဒ်လေး ရေးပေးထားပါတယ်။
“တိကျ၊ တိုင်းထွာ၊ ဖြစ်နိုင်တာ၊ ဆိုင်ရာသတ်မှတ်၊ ချိန်ကန့်သတ်။”
ရည်မှန်းချက်ကို တိကျနိုင်သလောက် တိကျအောင် သတ်မှတ်ပါ။ “ချမ်းသာချင်တယ်” ဆိုတာထက် “​ငွေ ဘယ်လောက်တိတိကို ဘယ်​​နှစ်နှစ် ​အကြာမှာ ဘာ​အလုပ်လုပ်ပြီး ရအောင်ကြိုးစားမယ်” ဆို​တဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
(၂) တိုင်းထွာလို့ ရ,ရမယ်
“ဝိတ်ကျချင်တယ်” ဆိုတာထက် “ဘယ်နှစ်​​ပေါင် ကျချင်တယ်”၊ “ကိုယ်​အလေးချိန်ကို ​​ဘယ်နှစ်​​ပေါင်​အောက်မှာရှိ​နေအောင် ကြိုးစားမယ်” ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။
ရည်မှန်းချက်ဟာ ဖြစ်နိုင်​တဲ့ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ရပါမယ်။ “မနက်​ဖြန် ထီပေါက်ရမယ်” ဆိုတာမျိုး၊ “မနက်​ဖြန် ​​ပေါင် ၅၀ ဝိတ်ချက်ချင်းကျ​စေရမယ်” ဆိုတာမျိုး​တွေက​​တော့ ဖြစ်​နိုင်​ခြေနည်းလှပါတယ်။
(၄) ကိုယ်​နဲ့ ဆိုင်ရမယ်
ကိုယ်​နဲ့ မသက်ဆိုင်​ မပတ်သက်​တဲ့ ရည်မှန်းချက် မဖြစ်ရပါဘူး။ ဥပမာ ​”မြန်မာ​ ​အမျိုးသား ဘောလုံး ​အသင်း ​၂၀၂၁ အ​​ရှေ့​​တောင်အာရှ​အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲရမယ်” ဆို​တဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ​ဘောလုံးပရိသတ်​တွေဖြစ်​တဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့နဲ့ သက်ဆိုင်​တဲ့ ရည်မှန်းချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ​အားပေးရုံက လွဲပြီး ကိုယ်လည်း ဝင်​ကန်ဖို့ မစွမ်းဘူး​လေ။ ​ဘောလုံး​အသင်း​နဲ့ နီးစပ်သက်ဆိုင်​တဲ့ ကစားသမား၊ နည်းပြ၊ ​​အားကစား ​အသင်း​အ​ဖွဲ့​တွေ​ဆိုရင်​​တော့ ဒီရည်မှန်းချက်ကို ထားလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်​ခြေ ရှိမရှိ​​တော့ ​သေချာ သုံးသပ်ကြရမှာ​​ပေါ့။
ရည်မှန်းချက်ဟာ ကိုယ်​နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့်အတွက် တကယ် လိုအပ်​တာမျိုး ဖြစ်​နေရပါမယ်။
(၅) အချိန် ကန့်သတ်ထားရမယ်
ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်​အချိန်မှာ ​​ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို ​အချိန်ကန့်သတ်ထားရပါမယ်။ ​အချိန် ကန့်သတ်မထားရင် ​အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
“​ငွေသခင် ဖြစ်ရမယ်” ဆို​တာထက် “​​ငွေသခင်ဖြစ်ဖို့ ​အတွက် ဘာ​အလုပ်​တွေလုပ်ပြီး ​​အသက် ဘယ်လောက်မှာ ငွေဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ရမယ်” ဆို​တဲ့ ရည်မှန်းချက်က ပိုပြီး စမတ်ကျပါတယ်။
“တိကျ၊ တိုင်းထွာ၊ ဖြစ်နိုင်တာ၊ ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်၊ ချိန်ကန့်သတ်။”​ဆောင်ပုဒ်က မှတ်ရတာ ခက်​လိုက်တာ။ ပိုတိုတာလေး မရှိဘူးလား?? ရှိတာ​​ပေါ့။
“တိ၊ တိုင်း၊ ဖြစ်၊ ဆိုင်၊ ကန့်”
ဒါ​နဲ့ စကားမစပ် ​”မြန်မာ့​ အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်” ဆို​တဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ စမတ်ကျမကျ ဆိုတာလေးကို သုံးသပ် ​မှတ်ချက်ပေး​ခဲ့ကြပါ​ဦး ခင်ဗျာ။